Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo,Ukukhanya Kwesikhumba Se Led,Guzheng Town Led Home Decorative,Guangdong Led Home Decorative - KwiChina Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo, Umvelisi noMboneleli
1. Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo
2. Ukukhanya kwesikhumba esikhokelwa ngokuqhelekileyo
Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo. Ukukhanya kwesikhumba esilumkileyo, ngamanye amaxesha esibizwa ngokuba ngumsila okanye umxhasi, ngumbane wedwa wokukhanya oqhotyoshelwe kwisiqhelo ngokuqhelekileyo ugxininiswe ngentambo, ngentambo okanye ngentsimbi yentsimbi. kunye neefetet okanye ngamanye amaxesha kwiindawo zokuhlambela. Imihlobiso ivela kwiindidi ezahlukeneyo zobukhulu kwaye ihluka kwizinto ezisuka kwisinyithi ukuya kwiglasi okanye ikhonkrithi kunye neplastiki. Imijondolo yethu yindlela yokugcina amandla kunye nazo zonke ezikhokelwayo.( Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo )
Ukukhanya kwepantshoni ekhokelela ngokuqhelekileyo
©2005-2018 Karnar Qhagamshelana nathi Imephu yomhlaba Last modified: April 22 2019 04:25:24.